सुनसरीमा सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जित्ने - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
सुनसरीमा सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जित्ने
देश चुनावमय हुँदैछ । सबै पार्टी र उमेदवारले आफूले जित्ने दावी गरिरहेका छन् । सुनसरी जिल्लामा पनि चुनावी रौनक वढिरहेको छ । कसले जित्ला ?
सगरमाथा आरोही तथा माओवादी केन्द्रका युवा नेता मदन चुडाल भन्नुहुन्छ – “सुनसरी जिल्ला लालकिल्ला हुन्छ यसपटक । यसलाई संसारको कुनै शक्तिले रोक्न सक्तैन ।” कसरी ? सुनसरीमा सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जित्ने मदन चुडालका नौ दावी यस्ता छन् ।
दावी नम्बर एक – समाजवाद प्राप्तीको निम्ती कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता वा तालमेलको कारणले गर्दा जित्ने सबभन्दा ठूलो राजनैतिक पहिलो आधार हो ।
दावी नम्बर दुई – सुनसरी जिल्लाको भूगोल तथा यहाँको जातिय वसोवासको दृष्टिले विश्लेषण गर्दा पनि वाम गठबन्धनले जित्ने आधार छ । किनकी यहाँको समस्या कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मात्र गर्न सक्छन् ।
दावी नम्बर तीन – देशभरकै चुनावी माहोल वाम गठबन्धनको पक्षमा छ । यसको प्रभाव सुनसरीमा पनि परेको छ । त्यसैले नेता भन्दा वढी नीति छान्ने प्रष्ट छ । बाम गठबन्धनजतिको जित्ने ठोस एजेन्डा अरुसँग छैनन् ।
दावी नम्बर चार – नेपालको दिगो विकासका लागि कम्युनिष्टहरुको वहुमतको सरकार आवश्यक छ । र मात्र हामीले सोचेको जस्तो विकास सम्भव छ । सुनसरीकै कुरा गर्दा विजयकुमार गच्छदार कति पटक मन्त्रि भए ? के गरे त ? यो मात्र एउटा उदारहण हो । यो कुरा सुनसरीका मतदाताले वुझिसकेका छन् । यो जितको अर्को आधार हो ।
दावी नम्बर पाँच – सुनसरीको स्थानिय तहको निर्वाचनको मतलाई आधार मान्दा पनि वामगठबन्धनले सुनसरी जिल्ला लालकिल्ला हुन्छ भन्ने वलियो आधार छ ।
दावी नम्बर छ – सुनसरीको पृष्ठभूमी नै वामपन्थी हो ।
दावी नम्बर सात – युवा मतदाताहरु कता वढी छन् भन्ने कुराले पनि चुनावमा भर गर्छ । यसका लागि तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गर्दा वामपन्थीतिर नै वहुमत युवा छन् । उदारहणको रुपमा पोहोरमात्र सम्पन्न स्ववियू निर्वाचनमा सुनसरीको मतपरिणाम हो । यसले पनि पुष्टी गर्छ वामगठबन्धनको जीतको ।
दावी नम्बर आठ – चुनावमा प्रतिष्पर्धामा रहेका वाम गठबन्धनका उमेदवारहरु सही छन् । नीति सही त्यसमा कार्यन्वयन गर्ने पात्र पनि सही भएपछि जीतको आधार झन वलियो भएको छ ।
दावी नम्बर नौ – बामगठबन्धनका कारण वैद्घिक वर्ग, मिडियाकर्मी, कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक, यूवा वर्ग, किसान, मजदुर, व्यवसायी, महिला तथा देशको भलो चाहने सवैमा यो पटक निकै वलियो भरोसा जागेको छ । यो झन गतिलो प्रमाण हो वाम जीतको ।
६ मंसिर २०७४, बुधबार १०:२४ मा प्रकाशित